Kpochapụ akụkọ gugul gị | Site na Linux
Ogologo oge gara aga ekwuru m banyere echiche ahụ nkwanye ùgwù maka nzuzo nke Google na ndị ọrụ ya.
Iji mee ka ihe ka njọ, taa bụ ụbọchị ikpeazụ anyị nwere ike ihichapụ ma gbanyụọ akụkọ Google, maka nke a, ihe niile anyị ga - eme bụ ihe ndị a:
Nbanye na akaụntụ Google gị na ọrụ ha ọ bụla.
Gaa na adreesị a: https://www.google.com/history.
Pịa na "Kpochapụ ihe niile web akụkọ ihe mere eme".
Mgbe anyị mere nke a, nchịkọta akụkọ ihe mere eme ga-akwụsị.
Echela echiche ugboro abụọ ma mee ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Kpochapụ ihe ndekọ Google gị
Daalụ nke ukwuu bara uru 🙂
Echeghị m na emetụla ya mgbe ọ bụla. Amaghị m, mana mgbe m banyere na peeji nhọrọ ndị ọ na-enye m bụ "Mee ka Ọrụ Weebụ Wee rụọ ọrụ" na "Mba daalụ." N'ezie ahọrọ m nke abụọ.
Iche, nke ahụ gosikwara m, echere m na anaghị m arụ ọrụ ya ọ ga-abụ xD
dị ezigbo mma ... ugbu a, m na-ajụ ihe, ozugbo ehichapụrụ akụkọ ihe mere eme, ọ nweghị ihe ọzọ a ga-azọpụta ọzọ?
Mba, n’ihi na ọ kwụsịtụrụ
Daalụ, na-enye aka. Ọ bụ ezie na ọ na-egosi na windo m na Linux.
mmm amaghi m hehe. Nke ahụ bụ, ị na-eji Linux mana gbanwee UserAgent ka ọ pụta dị ka Windows + IE? o_0U
O doro anya na ị na-eji Tor Browser
Ọ bụrụ na nke ahụ bụ akụkụ nke usoro mgbakwunye Firefox iji gbochie ha ịdebe gị, ma ọ bụ chekwaa data gị nwere ike iji (nke a na-eresịkarị ụlọ ọrụ maka ebumnuche mgbasa ozi). N'aka nke m, enweghị m nhọrọ ahụ arụ ọrụ (Ana m enyefe ya maka ebumnuche vidiyo nke Obi ike gosipụtara n'ihu)
Ọ dị mma, enwere m obi ọjọọ banyere nchekwa mana ọ bụghị ruo n'ókè doro anya LOL !!! (Anaghị m ekwu na ọ dị njọ m dokwuo hehe).
Ndewo, m nọnyeere LMDE na Firefox. Na ibe gị, achọghị m ikwu ya, mana dị ka iwu, echere m na ọ dịghị onye na-echebara ihe m ji eme ihe.
Na odighi ka ihe ojoo dika m na ekwu.
N'ụzọ doro anya, ị nwere ikike iji UserAgent nke ịchọrọ haha, n'eziokwu ị nwere ikike ịgwa m na achọghị m ịma HAHA, ekele maka ịza 🙂
Ọ mere ka m nwee ọchịchọ ịmata ihe, n'ihi na ahụtụbeghị m onye gbanwere UA ka Win + IE 😀
Ekele ^ _ ^
Ndewo Diazepan. Anọghị m na Tor, ọ bụ ezie na m na-ejikwa ya. Naanị ị ga-aga njikọ ahụ m tinyere, budata mgbakwunye ma bido iji ya.
Ọ dịghị onye na-eji google Chrome ma ọ bụ Chromium mgbe ahụ ??
Ana m eme, nke ahụ bụ ... M na-eji Firefox, Chromium, Opera na Rekonq dabere na ihe m chọrọ 🙂
ahh ok you are vasatail 😉 M mgbe ọtụtụ ozi ọma na m na-agụ eziokwu m na-amaghị ma ọ bụrụ na-aga n'ihu na-eji google chrome / chromium nchọgharị n'ihi na n'ikpeazụ ha bụ otu.
Amaghim ka esi acho Firefox na ule debian, ahuru m ihe ana akpo Iceweal
ee !! na icewell bụ iceweasel na ọ bụ firefox !!
# aptitude wụnye iceweasel (na voila, ị nwere firefox ma nwee akara ngosi ọzọ, otu ihe niile!)
Ekele ... ajụjụ: kedu ka ị ga - esi mee ka akara ngosi Debian gosi n’okpuru aha gị? Ana m eji Debian kwa mgbe m dere ọ na-egosi na ọ bụ akara ngosi nke Tux penguuin ma ọ bụghị akara Debian .. Why ??
Have ga-agbanwe Onye Ọrụ Onye Ọrụ na ihe nchọgharị gị, n'ụzọ nke ihe nchọgharị gị na-agwa weebụ (SiteLinux) na ị na-eji Linux ee, mana kpọmkwem Debian, lee, gụọ ebe a:
Changegbanwe UserAgent na Chrome / Chromium gụọ ebe a:
… Nwale ikwu mgbe m gbanwechara UserAgent iji gosi na m na-eji Arch…
Fuck KZKG ^ Gaara adighi ka gi
Ọ bụ na kọmputa gị ka enwetara gị? … Gịnị ka ị ka ji Windows? ¬_¬
Ọ dị mma ịghara ikwu banyere ya ...
M na-anwa Debian ma o nyere m njehie, m na-anwale Arch na otu.
Ha na-enye m ya site na Kubuntu ma ozugbo ọ gbanyere ya ọ na-egbochi egbochi, enweghị m ike ịnweta menu ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla.
Ndị a enyela m kọmputa ahụ dịka m weere ha, naanị na Kubuntu kama ịbụ ezigbo distro.
Ọ dị m ka kọmputa a ga-anọdụ n'ime ụlọ nchekwa na mgbe m nwetara ego m ga-azụta otu
Zipu ya ebe a n'ihi na ebe a ka anyi ji eme ihe ebube na ya hahahaha.
Otu ihe ahu ka ituru ole na ole dika m
Chrome / Chromium ... ọ ga-adị ma ọ bụ karịa dị ka OpenOffice / LibreOffice
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, nke mbụ bụ nke ụlọ ọrụ / ụlọ ọrụ na-echekwa ọdịmma nke ya ụzọ, yabụ na ọ bụghị ihe omimi na ya ịchekwa data / ozi na igodo ndị ọrụ, ebe nke abụọ (Chromium) bụ ndụdụ obodo, na-adịghị azọpụta data ma ọ bụ mmụọ ọjọọ n'ihi na ọ bụ site, site na maka obodo kpamkpam 🙂
Ma na okwu nke flash na ugbu a ga-abịa na google chrome .. Echere m na nke ahụ dịkwa na chromium ziri ezi?
mmm amaghim, amaghim ma a ga etinye ya n’ime Chromium kwa, mana echeghi m.
Agbanyeghị, HTML5 na ndị ọzọ plugins na ndị ọzọ ka flash nwere ike mgbe niile a ga-eji 🙂
Na ... ọ bụrụ na ị nye ibe gị Jabber ma ọ bụ ihe yiri nke ahụ iji kwuo?
Ọ bụrụ na site na vidiyo ka ị pụtara youtube, ọ naghị enye m nsogbu ọ bụla, amaghị m ma ọ ga-abụ maka na m na-eji gsnah ngwa mgbakwunye. Ọ na-enye ha ha mgbe m na-atụgharị peeji, bia, ọ naghị.
Ndo, amalitela ịtụgharị. Ọ na-atacha ahụ.
Paranoid? .HAHA, kedu ka imere. XDDD
Ọ dị mma, gịnị ma ọ bụrụ na ị ga-ekwu maka ihe a niile site na mail?
Daalụ maka ịdọ aka na ntị ahụ, amaghị m na m nwere oge ọ ga-ehichapụ ya.
O doro anya na enwere m ihe kemgbe June nke afọ gara aga na ndekọ ahụ kwụsịrị nanị ụbọchị ole na ole ebe a, ọ bụ ezie na m ga-ehichapụ ha (nke m chere na ha debere ihe niile mana n'egosighi m ya).
Oh Chukwu m, ihe m kwesiri ihichapu.
TuxInfo 45 dị!